Abalandeli beTwitch basimahla | Thenga abalandeli bakaTwitch | Umlambo
Abalandeli beTwitch basimahla | Thenga abalandeli bakaTwitch
Khulisa isitishi sakho seTwitch ngokukhawuleza kunanini na ngaphambili ngabalandeli basimahla beTwitch!
Sebenzisa inkonzo yethu ukufumana abalandeli beTwitch simahla abayinyani kwaye bajolise kwi-niche yakho, okanye uthenge ngokulula abalandeli beTwitch ukuze bakhule ngokukhawuleza.
Fumana abalandeli beTwitch basimahla or Thenga abathengi beTwitch
Ukuba awukhathali ukuthatha imizuzu embalwa suku ngalunye ukwenza isicwangciso, sinikezela ngeendlela ezintle ezinokufikelela kubalandeli abali-10 basimahla kunye nokuthandwa simahla kweTwitch ngosuku.
Abasasazi abanjengawe basebenzisa le nkonzo yokutshintshiselana ukufumana ababhalisile ngapha nangapha phakathi kwabanye abaSasazi.
Inkonzo ye-Streamular ikhuselekile kwaye ikhuselekile! Iitshaneli zeTwitch azifumani isohlwayo ngokusebenzisa inkonzo yethu kwaye sisebenza ngemfihlo, ukhuseleko kunye nokugcina imfihlo ngokungqongqo.
Ukuba ukhetha ukungazami kwaye ngokuzenzekelayo ufumane abalandeli beTwitch kunye nezinto ozithandayo suku ngalunye, ke sincoma isicwangciso esihlawulelweyo sokufumana umzamo we-zero, ukukhula kwemihla ngemihla!
Ndifuna Abalandeli bakaTwitch basimahla ngoku!
Landela la manyathelo alula kwaye ukonyuse ukukhula kwejelo lakho leTwitch ngemizuzu!
Nyusa ijelo lakho
Ukukhula kwabalandeli beTwitch simahla
I-Twitch yenye yeqonga lokukhula ngokukhawuleza kwabantu kwi-Intanethi. Ngabalandeli abangaphezu kwezigidi ezibini abasasaza inyanga nenyanga, iTwitch ayithandwa ngabantu abancinci kuphela kodwa nezizukulwane ezindala. Ukusuka kwiividiyo zokuzonwabisa ukuya kwimidlalo ye-Intanethi, abasebenzisi banokufumana malunga nalo naluphi na uhlobo lomxholo abawufunayo.
Elona qonga likhulu lokusasaza bukhoma
Ngaba uyazi ukuba iTwitch lelona qonga likhulu lokusasaza ividiyo? Emva kokumiliselwa kwayo okokuqala, yafumana iindwendwe ezizizigidi ezisibhozo. Namhlanje, ii-akhawunti zeTwitch phantse iipesenti ezingama-8 zayo yonke ingeniso eveliswe ngumxholo wevidiyo ekwi-intanethi. Eyona nto iphambili apho imisinga ebukhoma isasaza umxholo wabalandeli babo. Ayikhawulelwanga kwimidlalo ekwi-intanethi- icandelo "lokuyila" liyafumaneka kubazobi ukubonisa umsebenzi wabo kubasebenzisi.
Ngaphandle kokuzonwabisa, iTwitch ikwangumbutho okhutheleyo apho abo banomdla kunye nezinto ezithandwayo banokufumana indawo efanayo. Unxibelelwano ngamagumbi okuncokola kunye neenkcazo ezikhoyo zenza ukuba amava eTwitch axhumeke ngakumbi kwaye abe nobomi. Ngokudibanisa abalandeli kunye nokusasaza, iTwitch ibonelela ngeqonga elizinzileyo labasebenzisi ukujonga umxholo onomdla ofumanekayo ngohlobo losasazo olude, olubukhoma.
Kutheni le nto kufuneka ndibenabalandeli kwiTwitch?
Ayisiyiyo yokujonga umxholo kuphela, kodwa iTwitch iyeyona nto ibalulekileyo yengeniso kulungelelwaniso oluninzi. Abo basasazayo bahlala besazi ukuba uninzi lwababukeli luya kubuya kwaye lube ngabalandeli. Inani elikhulu labalandeli linokunceda ukuphucula igama lakho njenge-streamer.
Ukuba ufuna abalandeli ngokukhawuleza kwaye ufuna ukubeka umzamo omncinci kuyo, ungathenga abalandeli bakaTwitch ukuze uqhubele phambili ukukhula kwakho.
Kwiminyaka yakutshanje, iTwitch incede abasasazi ukuba bafumane isixa esikhulu semali. Abasasazi kwiTwitch banokufumana imali ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje ngengeniso evela kwiintengiso, iminikelo, ukubhaliswa, ukuthengisa kunye nokunxibelelana. Abasebenzisi abaphambili beTwitch benze usasazo ukhetho olunokubakho lomsebenzi, kunye nabanye abasebenzisi abafumana imali engange- $ 350,000 qho ngenyanga. Oku kuthetha ukuba ukuba unomdla wokwenza iTwitch indawo yakho yokusebenza, zininzi iindlela zokuyisebenzisa onokuzisebenzisa njengomthombo wengeniso.
Ukuba ufuna ukuqala ukufumana iakhawunti yakho yeTwitch, kuya kufuneka ube lilungu leTwitch, elinokwenzeka kuphela xa ubuncinci abalandeli be-50 kwisitayile sakho seTwitch. Inani elikhulu labalandeli liyanceda ukuphucula igama lakho njenge-streamer kwaye wenze kube lula kuwe ukuba uvelise ingeniso ethe kratya kwaye udume kwiTwitch.
Ngaphandle kwengeniso, kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni kufuneka uthathele ingqalelo ukukhula kwenani labalandeli bakaTwitch onabo ngoku. Makhe sijonge ezinye zezi zilandelayo:
1. Ukwazisa ngeBrand
Ukufumana ukwamkelwa kwegama kuphakathi kweenjongo eziphambili zentengiso. Ukuba ufuna ukukhulisa ishishini kwi-Intanethi, ngokuqinisekileyo kufuneka ulibeke phambili. Kungenxa yokuba abathengi baya kufuna ukuchitha izixhobo zabo kwiimpawu abazaziyo.
Imithombo yeendaba kwezentlalo sisixhobo esihle esenza ukuba ukwakhiwa kweempawu ezisebenzayo kunye nokukhawuleza. Kuyanceda ukufumana uphawu lwakho phambi kwabanye kunokuba ngokukhawuleza nangokulula. Ivumela abaphulaphuli ukuba balubone uphawu lwakho rhoqo, nokuba abantu abacingi ngeemveliso zakho.
Ukwakhiwa kwebranti kuxhomekeke kakhulu kwinkangeleko, ke thatha ixesha lokutyala imali kubukho bakho kwi-intanethi. Ngenisa izinto ezinomtsalane ezinje ngekhava elungileyo kunye neefoto zeprofayili. Yenza ulwazi ngawe lufikeleleke ngokulula, kubandakanya ukuba ungubani, wenzani, amajelo eendaba ezentlalo, kunye nendlela onokuqhagamshelwa ngayo.
2. Ukunxibelelana ngonobangela
Enye yeendlela ezikhawulezayo zokuvelisa ulwazi kuwo nawuphi na umcimbi kukuthumela ngawo kwimidiya yoluntu. Umxholo unokuthunyelwa amaxesha amaninzi, oku kunceda ukuba ubonwe ngabantu abaninzi. Ukuba uzama ukuqokelela ingqalelo yoluntu malunga nesizathu esithile, ukurekhoda kunye nokukhuthaza kwiTwitch kunokukunceda ukufezekisa le njongo.
Umxholo oqinisekileyo unokutsala ngokulula ukubonwa okukhulu kwaye kukwenze udume. Sebenzisa ii-hashtag ezichanekileyo kunokunceda ukuhambisa abantu kwiiprofayili zabo zemidiya yoluntu kwiphepha lakho lophawu kwaye ekugqibeleni kwiwebhusayithi yakho ukuba unayo. Oku kukunika imbuyekezo entle kutyalo-mali.
3. Ukwanda kwetrafikhi
Ukuba nobukho beendaba zosasazo olomeleleyo kwenza ukuba ukwazi ukwandisa itrafikhi kumxholo wakho. Njengoko imithombo yeendaba yoluntu inegalelo ekunyukeni kwetrafikhi yejelo lakho, itrafikhi oyifumana kwiinjini yokukhangela nayo iyanda. Ukuncedisa kule nkqubo, kubalulekile ukuba ucinge malunga nento oyithumelayo kunye nokuba wabelana kangakanani ngomxholo. Ukujonga ezi zinto kuya kukuvumela ukuba ujolise kumthengi olungileyo kwaye ukonyuse iinzame zakho zokuthengisa kwi-Intanethi.
4. Ukukhula kwamathuba
Ukuphuhlisa indawo eyomeleleyo yabalandeli kwi-intanethi kuthetha ukuba unokuba nefuthe. Oku kunokuguqula ukuba ufumane amanye amathuba okunceda uqhubele phambili ishishini lakho kwi-Intanethi. Ukunyusa okuhlawulelweyo, ukusebenzisana kunye nokuthengisa uphawu kunye nokuthengisa uphawu kunokuvula iingcango kumathuba amaninzi okuthatha ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo.
Umzekelo, ukuba wakhe ngempumelelo isiseko somlandeli olomeleleyo kwiTwitch yomxholo wakho wokudlala, abanye abazama ukufezekisa okufanayo nakubo banokucela ukuba wenze isolo okanye wabelane nabo ngezimvo. Impumelelo yale ntsebenziswano inokuguqula ingeniso kunye nabalandeli kuni nobabini.
5. Ulwazi lomdla wabaphulaphuli kunye nezinto ozikhethayo
Njengoko isiseko somlandeli wakho sikhula, uya kufunda ngakumbi malunga niche yakho. Ziqhelise ukumamela ekuhlaleni, esisenzo sokujonga iincoko malunga nezihloko ezixhumene nejelo lakho. Oku kuya kukunceda uqonde ukuba zithini ixabiso labaphulaphuli bakho. Ukunxibelelana nabo kumagumbi okuncokola kuya kukunceda uchonge ukuba yintoni abaphulaphuli bakho abalwa nayo kunye nokwenza umxholo onomdla kubo.
Ukunxibelelana ngcono nabaphulaphuli bakho, kuluncedo ukubukela ithoni kunye nolwimi olusetyenziswa ngabantu ukunxibelelana. Kunokubakho iyantlukwano kuhlobo lonxibelelwano olwenzekayo phakathi kwabantu abancinci kunye nezizukulwana ezindala. Cinga ukuba ngubani lo unqwenela ukujolisa kuye kunye nokulungisa umxholo wakho ngokufanelekileyo.
6. Unxibelelwano olungakumbi
Ngokwanda okukhulayo, uya kuza kwabanye abasebenzisi abanokuba nokunxibelelana okuhle abanako. Ukongeza ekubeni nesiseko esinyanisekileyo se fan, ungaphuhlisa unxibelelwano kunye nemithombo yokuhambisa umxholo, intatheli, abaphandi, njl.njl.
7. Ukuthengisa ngakumbi
Xa ufikelela kwinani elikhulu labalandeli, umxholo wakho uya kubonakala unomtsalane ngakumbi, kwaye uya kufumana intengiso eninzi. Ikwakunika umda wokhuphiswano kunabanye ababonelela ngohlobo olufanayo lwemveliso. Umzekelo, ukuba uqhuba inkqubo yehlaya kwiTwitch kwaye unabalandeli abangama-100,000, ngelixa okhuphisana nabo enika uhlobo olufanayo lokuzonwabisa enabalandeli abali-100 kuphela, amathuba okuba abalandeli abanokubakho bazokungena kwisitishi sakho endaweni yabo. Ukulandela okulandelayo kwenza ukuba ijelo lakho lihlale ngokwentlalo kuba liphucula ukuthembeka kwakho njengomboneleli womxholo olungileyo, owonwabisayo.
8. Ukuthandwa kwesiqulatho
Abaphulaphuli abaninzi banokunceda ukusasaza umxholo wakho ngokubanzi. Ukudala nokwabelana ngomxholo olungileyo imihla ngemihla kunceda ekusasazeni umxholo wakho kwiinethiwekhi zakho kunye neenethiwekhi zabalandeli bakho. Ukuba iinzame zakho zentengiso ziphumelele, abaphulaphuli bakho banokwabelana ngemidlalo yakho amakhulu okanye amawaka amaxesha ngosuku. Khawufane ucinge uhlobo lwefuthe elinokuba nalo kwi-brand yakho kunye nawe njenge-streamer / creator.
9. Ukuphucula amanqanaba okuzithemba
Ekupheleni kosuku, uya kuziva wonelisekile ngendima oyidlalileyo ekumanyeni iqela labantu abanomdla kunye nezinto ezifanayo. Ukuba ngumququzeleli weli qela kuyakwenza ukuba uzive unebhongo ngempumelelo yakho. Impumelelo yakho iya kunceda ukuphucula ukuzithemba kunye nokholo onalo kuwe ngelixa kukunika ubuchwephesha bokuqhubeka uphucula umsebenzi wakho.
Ndingabakhulisa njani abalandeli bam kwisitishi seTwitch?
Ukonyusa inani labalandeli onabo kwiTwitch kunokufezekiswa ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba ufuna ukuyenza ngokuhlawula umrhumo, kulungile. Kodwa ukuba ufuna ukufumana abalandeli abaninzi simahla, kungcono ngakumbi!
Nantsi inyani malunga nokusebenzisa iTwitch njengomvelisi wengeniso: inokukunceda kakhulu ukuba unenani elinyukayo labalandeli kwisitishi sakho. Ekuqaleni, kungathatha umzamo ngaphambi kokuba uqale ubone abalandeli abaninzi. Ngocwangciso olucokisekileyo nolucwangcisiweyo, uya kuba usendleleni eya ekwenzeni impumelelo kwikhompyuter yakho kwiakhawunti yokusasaza.
Ukuba ujonge ukufumana abalandeli beTwitch simahla, zininzi iindlela onokukwenza ngazo oko. Kwelinye icala, ukuba ufuna ukuchitha imali ethile kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwentengiso, kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo. Nangona kunjalo, kuhlala kucetyiswa ukuba ugqibezele ukhetho lwakho lwasimahla ngaphambi kokuba ubuyele kwabahlawulelweyo.
Izibonelelo zokukhula kwabalandeli beTwitch simahla
Ukuba usaqala ngejelo lakho leTwitch, sebenzisa iindlela zasimahla zokukhulisa abalandeli bakho kuqala. Ikuvumela ukuba uzame izimvo zakho ngendlela efanelekileyo yohlahlo-lwabiwo mali. Inokukunceda ukuba uqonde ukuba ungasikhulisa njani ngcono ishaneli sakho unikwe iindlela ezahlukeneyo zasimahla nezihlawulelwayo ezikhoyo.
Ngale nto, masibone ezinye iindlela onokuthi ukhulise ngazo abalandeli bakho beTwitch simahla.
1.Sebenzisa i-Streamular.com yaBafundi beTwitch yasimahla
Ufunda eli nqaku kwi-Streamular.com, umboneleli ophambili wabalandeli beTwitch yasimahla, ke kuyavakala ukuba siyikhankanye inkonzo yethu. Nangona sithandana, siwaphuhlisile amaqonga ethu ukuba abenomsebenzisi kakhulu kwaye alula kakhulu kuye nabani na ofuna ukufumana abalandeli beTwitch simahla. Ngokulandela nje abanye abasebenzisi beTwitch abanomdla ofanayo, ukubuya, inethiwekhi yethu inabanye abasebenzisi beTwitch abanomdla ofanayo abakulandelayo.
Unokwenza isicwangciso sasimahla yonke imihla kwaye ubuye usuku nosuku ukusisebenzisa kwakhona. Ke, ukuvumela ukuba ukhule ngokungapheliyo iakhawunti yakho yeTwitch yasimahla.
Ukuba awunomdla wokwenza umsebenzi wokundwendwela i-Streamular.com kunye nokulandela ezinye iiprofayili ngalo lonke ixesha ufuna abalandeli abaninzi beTwitch, emva koko unokungena kwisicwangciso esihlawulelweyo, esifuna ukuba ulandele abantu abayi-0 kwaye usebenze ngokuzenzekelayo, uhambisa abalandeli bakho iprofayile yemihla ngemihla ngaphandle kwesidingo sokuphakamisa umnwe okanye ubuyele kwiwebhusayithi.
Amawaka abasebenzisi beTwitch aqala ukufumana abalandeli beTwitch simahla ngenkonzo yethu, kodwa ngezona ziphumo zibalaseleyo, sicebisa ukwenza ezinye izinto ukukhulisa okulandelayo. Nceda ufunde ukuze ufunde ngeendlela ezininzi zokukhulisa abalandeli bakho beTwitch simahla.
2. Jonga imijelo yeTwitch eqhutywa ngabanye abasasazi
Ukuba liqonga loluntu, iTwitch inokukunceda kuphela xa unxibelelana nayo. Unokwenza oku ngeendlela ezininzi. Thetha kwabanye abasasazi kwaye ubukele umxholo wabo wokuhambisa. Nxibelelana nabo kumagumbi engxoxo kwaye uphendule kwimiyalezo evela kubo bobabini abasasazi kunye nabalandeli. Bonisa umdla wokwazi okungaphezulu ngomxholo wabanye kwaye ubancome ngolwazi lwabo okanye ukuba ufumanisa umxholo wabo unomdla.
Xa abanye abasebenzisi bebona ukuba unomdla kwaye unobuhlobo, baya kufuna ukukulandela umva. Ukuba umsasazi odumileyo uthatha isigqibo sokulandela, amathuba okuba abalandeli babo baya kuqala ukukulandela.
Ukuphuhlisa ubudlelwane nabanye abasasazi kuluncedo kuba unokubuza omnye nomnye ukuba abambe okanye anyuse amajelo akho. Ubambiswano lunokubangela ukubonakaliswa okuhle kwegama lakho kwaye lunokwakha kakhulu uphawu lwakho lwegama. Xa usakha ubudlelwane obunje, qinisekisa ukuba unomdla wokwenene wokwenza ubuhlobo nabanye abasebenzisi. Oku kunokukunceda uthintele ukuba negama lomntu obuza kuphela abanye ngokuzinyusa.
3. Zimasa iminyhadala ekwi-intanethi kunye nokudibana
Ukwazi abanye abasebenzisi kunye nabalandeli buqu kukunceda ukuba uqokelele ulwazi ngakumbi malunga nomdla wabantu kunye nendlela abayibona ngayo kwaye bayisebenzise ngayo iTwitch. Ukuzama ukunxibelelana nabantu abangaphandle kweTwitch. Zimasa iintlanganiso ezikwi-Intanethi, iinkomfa, kunye neentlanganiso zentlalo ezifanayo apho ufumana ukwazi abanye ngcono.
Unokukhetha ukuya kwimisitho yokusasaza okanye kwiintlanganiso zemidlalo yevidiyo ebanjwa minyaka le kwizixeko ezikhulu kwihlabathi liphela. Kuphakathi kweendlela ezilungileyo zokukhulisa abalandeli beTwitch yasimahla, wenze abahlobo abatsha, kwaye ufunde ukuba abanye benza ntoni. ISupanova, iMineCon, kunye neTwitch Con zezinye zeziganeko ezithandwayo zeTwitch onokuthi uye kuzo. Unokujonga kwakhona i-Facebook kunye ne-Twitter ngeendlela ezincinci zokuhlangana ezinokuthi zenzeke kwisixeko sakho okanye kwi-Intanethi.
Indlela elungileyo yokwenza unxibelelwano kwiminyhadala kukunika ikhadi lakho leshishini phakathi kwabahambiyo. Qiniseka ukuba ubandakanya igama lakho lomsebenzisi kwiTwitch kunye nokunxibelelana nezinye iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu. Kuyanceda ukuba olu lwazi malunga nawe lufumaneke ngokulula kuba abanye banokunxibelelana ngokukhawuleza nawe kwizixhobo zabo kanye xa befumana ulwazi.
4. Sebenzisa ezinye iiwebhusayithi zokuncokola
Abasebenzisi abaninzi beTwitch abayazi ukubaluleka kokusebenzisa amanye amajelo eendaba ezentlalo ukuphucula ukubonakaliswa kwegama labo. Yilapho abasebenzisi abaphezulu beTwitch benza okuninzi kunethiwekhi yabo. Iindawo ezinje nge-Instagram, Twitter, kunye ne-Snapchat zinceda abasebenzisi beTwitch ukuba bahlaziye abalandeli babo kwaye banxibelelane nabo rhoqo.
Kuya kufuneka wenze olona tshintsho lusebenzisa amajelo eendaba ezentlalo kuba oko kunokukunceda ukuba uzazise kunye negama lakho kubalandeli bakho abaza kuhlala kwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Kwilizwe lanamhlanje elinamazwe amaninzi, amajelo eendaba ezentlalo anokunceda ekuvaleni izikhewu ngokwasemzimbeni nasekufumaneni abaphulaphuli ngemidla efanayo kunye nemisebenzi.
Sukusebenzisa nje iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu ukuthumela uhlaziyo ngobomi bakho. Yisebenzise ukuxelela abalandeli bakho ngomxholo omtsha. Unokusebenzisa amajelo akho ukuba nengxoxo nabalandeli bakho ngohlobo lwee-polls okanye ii-Q & A ezisebenzayo apho unokufuna khona ingxelo kumxholo wakho okanye unxibelelane nje nabo. Oku kuyakunceda ukwakha umfanekiso oqinisekileyo wentengiso yakho eya kuthi abalandeli bajonge phambili ekusebenzisaneni nayo.
Gcina ukhumbula ukuba ukuthumela ii-tweets ezizenzekelayo malunga nomxholo wakho weTwitch akunakuba njengokuzibandakanya. Endaweni yoko, unokukhetha ukwabelana ngemidla yakho, iiprojekthi osebenza kuzo, izinto onomdla kuzo, okanye uhlaziye ukuba uza kuba yintoni umsinga wakho olandelayo. Oku kuya kunceda ukwenza ijelo lakho libe lelakho.
5. Phuhlisa isiqhelo sokusasaza
Ngaba ufuna ukwakha okuthembekileyo okulandelayo kwiTwitch? Gcina ishedyuli ehambelanayo kunye rhoqo. Hlaziya abaphulaphuli bakho ngaphambi kwexesha malunga nokuba baya kungena nini ukuze bajonge umxholo wakho. Yenza ishedyuli kwaye wabelane ngayo nabaphulaphuli bakho. Le yindlela entle yokwakha ukuthembana nabantu kunye nokukhuthaza ukubonwa mihla le.
Ukwamkela ishedyuli yokuhambisa ngokungaguquguqukiyo ayizukufumana nje ukuthembela kwabantu. Iya kunceda ekumiseleni njengengcali ethatha ngokungxamisekileyo umsebenzi wabo wokuhambisa kwaye uzimisele ngokwabelana ngomxholo olungileyo. Ukuba awudibanisi kwaye unamathela kwishedyuli yemihla ngemihla, ke ababukeli abawuthandayo umxholo wakho kwaye bafuna ukubona ngaphezulu kwawo ngekhe babenako ukubona. Ngenxa yoko, baya kudlulela kwelinye itshaneli yeTwitch okanye nakwezinye iisayithi zonxibelelwano.
Nje ukuba uqale ukutsala abalandeli, kubaluleke kakhulu ukubagcina bebandakanyekile ukuba unomdla wokwakha ikhondo lomsebenzi njengomsasazi. Uninzi lwabasasazi benza impazamo yokungaphuhlisi isicwangciso sokwabelana ngomxholo rhoqo. Ukusebenza ujikeleze ishedyuli kuya kukunceda uhlale uhlelekile kwaye uhlukanise ijelo lakho nakwabanye abangaguqukiyo.
Yabelana ngeshedyuli yesiqulatho sakho kunye nababukeli bakho ukuba ubazise xa benokulindela ukukufumana kwiTwitch. Faka into oza kuyidlala kwaye ngabani ixesha. Ukuba, ngasizathu sithile, kukho utshintsho kwishedyuli yakho, khumbula ukusebenzisa amajelo eendaba ezentlalo okanye iswitshi yesitishi sokunxibelelana ukunxibelelana nabaphulaphuli bakho ngotshintsho. Oku kuyakuvumela ababukeli abanomdla ukuba bajonge umxholo wakho xa uvela kwaye ubanike nesizathu sokubuyela kwisitishi sakho kwixesha elizayo.
Enye into kukuba kufuneka uqinisekise ukusasaza umxholo rhoqo. Ukusasaza rhoqo kunye nexesha elide kukonyusa amathuba akho okuqatshelwa ngabantu. Ngokubonelela abaphulaphuli bakho ngomxholo omninzi, ubanika ixabiso ngezixhobo zabo, eziza kuthi zichaphazele ukuthembeka kwabo kunye notyalo mali lwabo kwisitishi sakho.
Ukwazi ngakumbi malunga nendlela onokuthi ufumane ngayo abalandeli beTwitch yasimahla, sithumele umyalezo apha, kwaye siya konwaba ukuxoxa ngeendlela ezahlukeneyo kunye nawe!
Kutheni ndifuna abalandeli beTwitch yasimahla?
Sonke siyazi ukuba nabalandeli abaninzi beTwitch banezibonelelo ezininzi kwiakhawunti yakho yeTwitch. Xa unabalandeli abaninzi, uhlala ufumana ukuthanda okungakumbi, amagqabantshintshi amaninzi, kunye neembono ezingakumbi.
Oku kunceda ngokwenene abo bazama ukwenza imali okanye bafumane ukubonwa besebenzisa iTwitch. Emva kweminyaka yokuba ziinkokheli kumzi mveliso we "Free Twitch Followers", siphuhlise i-100% yasimahla inkqubo yabasebenzisi yokufumana abalandeli abaninzi beTwitch yonke imihla. Zikumgangatho ophezulu kwaye zijolise kwimidla yakho.
Ngaba abalandeli beTwitch bayinyani?
Ngokwenyani sibonelela abalandeli bokwenyani kubathengi bethu abahlawulwayo, ngokungafaniyo ne-98% yewebhusayithi phaya. Uninzi lwezinye iiwebhusayithi zibanga ukuba zinikezela ngale nkonzo yasimahla, kodwa azenzi njalo! Siyakwazi ukubonelela ngale nkonzo yasimahla kuba wonke umlandeli ofunyenwe kusetyenziswa inkonzo yethu yokulandela elandelayo ngomnye umsebenzisi onjengawe.
Inkonzo yethu luluntu oluvumela abantu abathanda ukuba bafumane kwaye badibanise. Singumlamli nje. Musa ukukhohliswa ziisayithi ezithi zibonelela ngabalandeli bokwenyani. Bekusoloko kusithiwa ukuba ikhangeleka intle kakhulu ukuba ibe yinyani, kungenzeka ukuba… kwaye icace gca, kufuneka siqaphele ukuba umgangatho wabalandeli uyakwahluka. Kungenxa yokuba abanye abantu babeka nje iinzame ezininzi kwiiakhawunti zabo kunabanye. Oku kuyafana ekuthethwa malunga neTwitch xa iyonke.
Ke, musa ukothuka ukuba umzuzu omnye uphawu olupholileyo luyakulandela kunye nomzuzu olandelayo umntu oqhelekileyo oneefoto ezimbalwa ezenzayo. Ngaphandle koluhlu lwabalandeli bonke abathunyelwa kuwe, bakhethwe kwiminqweno efanayo oyikhethile xa ubhalisela inkonzo yethu.
Ndibagcina njani abalandeli bam beTwitch?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngumsebenzi wethu ukuhambisa abantu abatsha kwiphepha lakho leTwitch simahla.
Ngumsebenzi wakho ukubagcina apho. Izifundo zibonisa ukuba iphepha lakho alinawo umxholo omninzi okanye aliboneleli ngesiqulatho sitsha esitsha kunye nesibandakanyekayo rhoqo amanani akho azakuwa.
Senza konke okusemandleni ethu ukubonelela abantu abanomdla ofanayo. Oku kuthetha ukuba iphepha lakho libonelela ngesiqulatho malunga nezinto ozikhethileyo ngaphambi kokuvula isicwangciso sasimahla okanye esihlawulelweyo kunokwenzeka ukuba ugcine kwaye ukhulise iphepha lakho.
Iingcali zicebisa ukuba ukuthumela umxholo osemgangathweni amaxesha ama-1-3 ngosuku kubonakala kutsala iziphumo ezilungileyo. Kubalulekile ukuthatha ixesha lakho ngezithuba zakho. Qinisekisa ukuba iifoto / iividiyo zikumgangatho ophezulu kwaye zinxulumene nomxholo we-Instagram yakho. Okokugqibela, qiniseka ukunxibelelana nabaphulaphuli bakho. Ukuba bathetha ngezithuba zakho qiniseka ukubaphendula. Kananjalo cinga ngokundwendwela iphepha labo kwaye ubanike ukuthanda okanye ezimbini. Iya kuhamba ngendlela xa isiza ekudaleni ubudlelwane bexesha elide kunye nephepha lakho.
24I ngoJuni 2022
Iigiya ozifunayo ukuze uqalise isitishi sokusasaza kwiTwitch
Bayanda abadali bomxholo, ngakumbi abadlali bemidlalo, baguqukela kwiqonga levidiyo elidlala bukhoma elibizwa ngokuba yiTwitch, kwaye ngezizathu ezilungileyo. Abadali abakuxabisayo ukunxibelelana nabalandeli babo...
15I ngoJuni 2022
Injani iTwitch Combating Hate Raids?
Ukuduma okumangalisayo kukaTwitch kuzise neendaba ezimbi zabasasazi. Kwiinyanga zamva nje, uninzi lwabasasazi beTwitch baye baxela uhlaselo lwentiyo, oko kukuthi, abasebenzisi abasebenzisa uhlaselo lukaTwitch...
7I ngoJuni 2022
Indima kaTwitch ekutshintsheni iHlabathi lokuDalwa koMxholo weVidiyo
Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, ukuthandwa komxholo wevidiyo kuye kwanda kakhulu. Bobabini abadali bomxholo abazimeleyo kunye neebrendi baguqukele kumxholo wevidiyo kwaye bangcamla impumelelo,...
Sinikezela ngeeNkonzo zokuThengisa ngakumbi
Iinkonzo zeTwitch Instagram Services Iinkonzo ze-Twitter IiNkonzo zePinterest IiNkonzo ze-YouTube Spotify IiNkonzo Iinkonzo zeSandiCloud
Ngeenkonzo ze-Instagram, nceda undwendwele iwebhusayithi yethu yamaqabane, UMnuInsta.com. Cofa apha ukujonga iinkonzo zabo ze-Instagram
Ngeenkonzo ze-YouTube, nceda undwendwele iwebhusayithi yethu yamaqabane, I-SubPals.com. Cofa apha ukujonga iinkonzo zabo ze-YouTube
Ngaba uyafuna ukuba simahla, umgangatho ophezulu kunye nabalandeli ekujoliswe kubo beTwitch yonke imihla?
Joyina amawaka abantu asebenzise ii-Streamular yonke imihla ukufumana abalandeli beTwitch yasimahla kunye nezinto abazithandayo kumajelo abo!
Fumana simahla, umgangatho ophakamileyo kunye nokujolisa kubalandeli bakaTwitch ngonqakrazo nje oluncinci kumboneleli we-Intanethi othembekileyo weenkonzo zentengiso zeTwitch.
Ilungelo lokushicilela © 2022 Ukusasaza. Onke Amalungelo Agciniwe. Sitemap